Mudaddii khilaafka uu ka dhaxeeyay Labada Aqal, imisa sharci oo Aqalka Hoose uu ansixiyay ayaa wali horyaalla Aqalka Sare? – Kalfadhi
Mudaddii khilaafka uu ka dhaxeeyay Labada Aqal, imisa sharci oo Aqalka Hoose uu ansixiyay ayaa wali horyaalla Aqalka Sare?
Akhristayaal sida aan horay idinkugu sheegnay, mudaddii uu khilaafka ka dhaxeeya labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya, waxaa dib-u-dhac uu ku yimid meel-marinta hindise-sharciyeedyo ay aheyd in Baarlamaanka labadiisa aqal ay ansixiyaan.
Khilaafkii labada Guddoomiye waxaa uu sababay in ay hakato wada-shaqeynta labada gole, waxaana istaagay dhammaan xiriirkii labada gole.
12-kii bishan Oktoober, labada Gole ayaa si wada-jir ah usoo saaray warqad ay ku cadeynayaa in ay heshiis gaareen. Tifaftirayaasha Kalfadhi ayaa fahansanaa in khilaafka labada gole uu salka ku hayay safaradda dalka dibadiisa loo aado, iyo in si hoose loola dhaqmo Aqalka Sare ee Baarlamaanka.
Haddaba qodobka 3-aad ee ku xusan heshiiska ay soo-saareen, waxaa ku cad in labada gole ay ku heshiiyeen in ay qeyb-sadaan xubnaha ku metelaya shirarka Baarlamaannada ee ka dhacaya Gobolka iyo Adduunka intiisa kale.
Labada Gole, waxaa ay mataaneynayaan guddiyada labada aqal ee u wada xilsaaran waajibaad isla mid ah kuwaas oo iska kaashan doona dhammaan howlaha xeer-dejinta.
Golaha Shacabka iyo Golaha Aqalka Sare waxay ku heshiiyeen in ay yeeshaan xeer hoosaad wadajir ah, kaas oo faahfaahinaya dhammaan arrimaha la xiriira qodobbada lagu heshiiyay guddiyada wada-jirka ah, habraaca guud ee isu-gudbinta hindise-sharciyeedyada, iyo xiriirada gudaha iyo dibedda ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Kalfadhigii lasoo dhaafay golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya waxaa uu golaha Aqalka Sare u gudbiyay ilaa siddeed (8) hinside-sharciyeed, kuwaas oo ay aheyd in Aqalka Sare iyagana ay ansixiyaan ama ay diidaan si loogu gudbiyo madaxweynaha, isagana uu xeer-madaxweyne uu ku saxiixo.
Xildhibaanno ka tirsan golaha shacabka ayaa Kalfadhi u sheegay in hindise-sharciyeedyadaasi ansixinooda ay u baaqdeen khilaafka labada gole.
Maxey maanta ka wada-hadleen Ergayga QM iyo Guddoomiyaha Golaha Shacabka?